ခေတ်သမီးပျို – Grab Love Story
by phyu May 14, 2021
“ငါ့တူလေး မင်းမင်း မင်းဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်နေတာလဲကွ” ဦးဦး ကျနော်ဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်နေတာ” မင်းကွာ အရည်မရအဖတ်မရဝတ္ထုတွေ ဖတ်နေရတယ်လို့” “ဦးဦးကလည်း ကျနော်ပျင်းလို့ပါ” အးပျင်းနေရင် ဒီလိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ တရားစာအုပ်တွေဖတ်ပေါ့” ဟုတ်ကဲ့.ပါဦးဦး”ကျနော်လည်း ဦးလေးပေးတဲ့စာအုပ်ကို ခဏယူကြည့်တော့ အနစ္စအမြဲမရှိသော၊ စာအုပ်ဖြစ်နေတယ်။ “ဟင်းးး” သက်ပြင်းချလိုက်ရတယ်။ ကဲဗျာ စဉ်းစားကြည့်လိုက် သူက ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်က.. ကထိက၊ ကျနော်က သူ့တူ ကျနော်ဆယ်တန်း အောင်ပြီးကတည်းက ရောက်နေတာ။ သူက အသက်လေးဆယ်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘာတဲ့ ပင်စင်ရရင် ဘုန်ကြီးဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်မယ်တဲ့။ ကျနော်ကိုလည်း သူ့လိုလူပျိုကြီးဖြစ်စေချင်တာ။ ကျနော်ဗျာ အခုဖိုင်နယ်ရောက်ပြီ၊ သူ့ကိုကြောက်လို့ ရည်းစားမထားရဲဘူး။ ခုခေတ်စကီလေးတွေက မိုက်မှမိုက်၊ အလန်းစားတွေ၊ ကိုယ့်အကြိုက်မတွေ့သေးလို့သာ.. မစွန့်စားရဲတာ။ တနေ့တနေ့တရားနာရတာနှင့် တရားထိုင်ရတာနှင့် မလွယ်ဘူဗျ၊၊ သူ့အိမ်နေတော့ သူ့စည်းကမ်းပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လည်း ညစ်ညစ်နှင့် ကျောင်းဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ နောက်ဆုံးကပဲဆင်းတာ “အွန့်” ဆင်းလိုက်တာကားပေါ်တက်လာတဲ့ စကီလေးကို သွားတိုက်မိတယ်၊ သူ့လက်ထဲက စာအုပ်တွေပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျ။ “ဆောရီး.ဆောရီး” ကျနော်လည်း ပြာပြာသလဲကောက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုလှမ်းပေးပြီး “ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ” “မြန်မြန်လုပ်ကြပါဗျ၊ ဒီမှာကားပေါ်တက်မယ့်သူတွေ ရှိတယ်” စပါယ်ယာလှမ်းအော်တော့ ကျနော်ဘေးကပ်လိုက်ရတယ်။ ကောက်မလေးကို သေချာကြည့်လိုက်မှ ဟအရမ်းမိုက်တယ်။
အရပ်ရှည်ရှည် အသညးဖြူဖွေးလို့၊ ဇင်ယော်တောင်မျက်ခုံးတန်းလေး၊ သွားလေးတွေက ညီညီညာညာ၊ နှင်းဆီဖူးလေးလို နှုတ်ခမ်းနှင့်၊ ကျနော့်ရင်ထဲ ရေခဲမြစ်စီးဆင်းသွားတယ်။ ကျနော့်ကို စပါယ်ယာခဏလှမ်းကြည့်ပြီး “ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဇာတ်ကားရောင်းမလို့ပါ” “အာ.ဒီခွေးသားတော့” ကောင်မလေးလည်း ရှက်ရှက်နှင့် ကားပေါ်တက်သွားတယ်။ မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားတာတောင် မြင်လိုက်ရတယ်။ “မိုက်တယ်ကွာ၊ မနက်ဖြန်ကျောင်းစောစောလာပြီး စောင့်ရမယ်” ကျနော်ညတောင်အိပ်မပျော်ဘူး၊ တစ်ညလုံး ကောင်မလေးမျက်နှာကိုပဲ မြင်ယောင်မိတယ်။ အခုမှ ဖူးစာရှင်တွေ့ပြီလားမသိဘူး၊ မနက်အစောကြီး အိပ်ရာထတယ်၊ ဦးလေးနှင့်အတူ ကျောင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူး ကိုယ်ဘာသာသွားမယ်ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့အထွက် “မင်းမင်းဘယ်သွားမလို့လဲ” “ဧကျာင်းဘက်ဦးဦး” “အေးဘုရားရှိခိုးပြီးမှသွားလေ” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့” ဘုရားခန်းထဲဝင်ပြီး ပုဆိန်ပေါက်ရှိခိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဦးလေးအလစ်ကို ထွက်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ဧကျာင်းဘက်ကားစီးတာ စိတ်ကိုမရှည်ဘူး၊ ခါတိုင်းလည်း ဒလိုပါပဲ၊ “ဟာကွာ..နောက်ကျတော့မယ်နှင့်တူတယ် သောက်ကားကနှေးလိုက်တာ” ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့ ကားမှတ်တိုင်မှာ လူရှင်းတယ် ။ကျနော်မှတ်တိုင်ရှေ့က စောင့်နေတုန်း ဦးလေးကားလာတော့ ကော်ဖီဆိုင်ထဲ ပြေးဝင်ပုန်းရတယ်။ “ဟင်းးးမလာသေးဘူးလားကွာ” အရေးထဲ ကော်ဖီဆိုင်က သီချင်းသံထွက်လာသေးတယ်။ ပြုံးတောင် ပြုံးမိသေးတယ်။ ကိုယ့်အဖြစ်နှင့်တူလို့၊ သူချင်းက ဘိုဘိုဟန်သီချင်း “စောင့်ရတာမောပေါ့၊ ခေါင်းမူးသွားပြီ ဒူးယားလေးရယ်၊ နင်ဘယ်မှာလဲ ကားပေါ်ပါသွားလား တကယ်ပါ တစ်နာရီလောက်ရပ်စောင့်ကြည့်တာတောင် မလာသေးဘူး” တစ်နာရီလောက်စောင့်ပြီးတော့မှ ကောင်မလေးက အိမ်စီးကားပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
သွားပါပြီ ပြေးလိုက်ဖို့ကလည်း မလွယ်တော့ နောက်ကနေပြီး လိုက်ခဲ့တယ်။ စာသင်ဆောင်နံပါတ်သုံးဖက်က ညးဝင်သွားတော၊ အဲဒီနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ အနားလည်းရောက်တော့ ကားရောလူရော မရှိတော့ဘူး။ ဟာသွားပြီ။ ဒိတစ်ဆောင်လုံးရှာရတော့မယ်ဆိုပြီး မြေညီထပ်ကနေ တထပ်ချင်းရှာခဲ့တယ်ဗျ။ တခန်းမှ ရှာမတွေ့ဘူး။ အဲဒါနှင့်စိတ်ပျက်ပြီး ကင်တင်းကိုသွားမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြနထွက်တော့ “အွန့်” “ဟင်..ရှင်.ရှင်..တိုက်ပြန်ပြီ” “အာဆောရီးဆောရီး” “လုပ်ပြန်ပြီ ဘာဆောရီးလဲ” “တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ” “ရှင်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီး” “ရေစက်လို့ထင်ပါရဲ့” “ဘာရှင့်” “ဆောရီးဆောရီး” “ဟင်း အူကြောင်ကြောင်နှင့်” မိုးနေခြည်မှာ တနေ့က သူ့ကိုကားပေါ်အတက်မှာ တိုက်မိတဲ့သူကို သတိထားမိတယ်။ လူပုံက ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် အရပ်မြင့်မြင့်နှင့်ဆိုတော့။ ဒါပေမယ့် ကားစပါယ်ရာအော်လိုက်တော့ နည်းနည်းရှက်သွားတယ်။ အိမ်ရောက်ပြန်တော့လဲ သူ့မျက်နှာပဲ မြင်ယောင်မိပြီး အိမ်အလုပ်ကူလုပ်တာက ဟိုဟာလွတ်ကျ ဒီဟာလွတ်ကျနှင့်မို့ အပျိုအဒေါ်ကြီးက ဗိုက်ခေါက်လိမ်ပြီး,အဆူခံရတယ်။,စည်းကမ်းကြီတဲ့ အဒေါ်မို့ကြောက်ရတယ်။ “မိုးနေခြည်.လုပ်လိုက်ရင်ရှပ်ပြာ.ရှပ်ပြာနှင့်” “နင့်စိတ်တွေဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲ၊ ဂနာမငြိမ်ဘူး” “အမလေးကြောက်ပါပြီ တီတီရဲ့” “အေးမိန်းကလေးဆိုတာ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေရတယ်သိလား” “သူအဲလိုဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလုပ်နေလို့ လင်မရတာ ခိခိ” လို့တွေးရင်း အလိမ်ခံရတဲ့ဗိုက်ကို ပွတ်ပေးနေရတယ်။ အဒေါ်အပျိုကြီးက ကျောင်းသွားရင် အမြဲလိုက်ပို့ ညနေကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာလိုင်းကားစီးပြန်ရတာ၊ တူမကို တချက်ကလေးမစိတ်မချဘူး။ ပြောသေးတယ်။ “နင့်မိဘတွေငါ့ကို စိတ်ချလို့အပ်ထားတာ၊ နင်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် မလုပ်နှင့်တဲ့” မိုးကလည်း အဒေါ်အပျိုကြီးကိုကြောက်လို့ ကိုယ့်ကြိုက်တွဲသူကိုတောင် အီစီကလီမလုပ်ရဲဘူး။
အခုကြည့်လေ မနေ့ကလူ ကားဂိတ်မှာတွေ့ပြီး အခုမိုးတို့နောက်လိုက်လာတယ်။ မိုးက အိမ်သာဖက်ကထွက်တော့ သူနှင့်တိုက်မိပြန်ပြီ။ ဒေါသထွက်မိတယ်။ ပြောပုံက ရေစက်လားမသိဘူးတဲ့ ခစ်ခစ်.ခစ်ရယ်ချင်စရာ။ “ဟေ့..မိုးဟိုမှာ ဆရာစာသင်နေတယ်၊ အဆူခံနေရအုံးမယ်” “အေးအေး” အဲဒီဆရာကဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး၊ ဘုဂွကလန့် မိန်းကလေးတွေဆို တချက်မှ မျက်နှာသာမပေးဘူး၊ အိနြေ္ဒကြီးနှင့်။ “ကဲမိုးစာသင်လို့ပြီးပြီ ငါတို့ပြန်ရအောင်၊” “ဧအးအေး” “ဟေ့ဒါနှင့်မနေ့က နင်လူတသ်ယောက်နှင့် တိုက်မိသေးတယ်ဆို၊” “အေးဒီနေ့လည်း ထပ်တိုက်ပြန်ပြီ” “ဟီဟိ..ဖူးစာရှင်လားမသိဘူး” “ဟွန့်ကောင်မ စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်” “အေးဟ..မနက်က သူကပြောသွားတယ် ရေစက်လားမသိဘူးတဲ့” “ဟဲဟဲ..ဖြစ်နိုင်တယ်မိုး” ကျောင်းရှေ့လမ်းလျောက်လာရင်းက ဟိုလူကိုကားဂိတ်မှာ တွေ့ရပြန်တယ်။ “ဟေ့.ရှေ့မှာ.အိနြေ္ဒမပျက်စေနှင့်ကြည့်လိုက်ဦး” “ဟိုဘက်ကအရပ်ရှည်ရှည်နှင့်လူလား” “အေးဟုတ်တယ်” “အဲဒါ ကိုမင်းမင်းလေ” “နင်က ဘယ်လိုသိသလဲ၊” “အဲဒါဆရာ့တူလေ” “ဘုဂွကလန့်ဆရာလား” “အေးဟုတ်တယ်” “အမလေး ဒုက္ခပါပဲ” “အမလေး အခုထဲကတွေးပူနေတယ်” “ခစ်..ခစ်..” “ဘာလဲနင်ကြွေသွားပြီလား၊” “အာ.နင်ကလည်း” “အံမာ ရှက်နေရသေး ခေတ်သမီးပျိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်း” “ဟဲ့ဟိုမှာလာနေပြီ” “မိုး..ကျနော်မိုးကိုခင်ချင်လို့” “ရှင်” “ဟင်းးဟင်းးးမိုးကိုခင်တယ်၊ နောက်တော့ ရည်းစားစကားပြောမယ်၊ နောက်ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားမယ်၊ ဒီလိုလား’” “ဗျာ” “ဟဲ့စန္ဒာဘာတွေလျောက်ပြောနေတာလဲ” “နိမိတ်ဖတ်တာ” “အာဒီမိန်းမ” မိုးလည်း ရှက်ရှက်နှင့် စန္ဒာဗိုက်ကြောလိမ်လိုက်တယ်။ “အာ..လွှတ် .ဟနာတယ်” “အဟဲ..ကျနော်မင်းမင်းပါ” “ဟုတ်ကဲ့” “ကဲကိုမင်းမင်းရှင်နှင့်ပြောနေရင် အိမ်ပြန်နောက်ကျရင် သူအဒေါ်အပျိုကြီးက ဆူလိမ့်မယ်” “ဗျာ၊အော်..ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ကဲ့” “စန္ဒာရှေ့မှာကားလာပြီသွားရအောင်” “ကိုမင်းမင်းကားလာပြီ ကျမတို့ကိုခွင့်ပြုအုံး” “အော် ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့” “ကျနော်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်” “ရှင်” “လိုက်လို့မရဘူးလား၊” “ရပါတယ် ကျမတို့ကားမှမဟုတ်တာ” မင်းမင်းလည်း မိုးလိုက်သွားသောကားနှင့် လိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။ မိုးမှာတလမ်းလုံး ရင်ခုန်နေရတယ်။
သူက မိုးနောက်က ကပ်နေတာလေ။ မင်းမင်းလည်း ကားပေါ်တက်လိုက်မှ မိုးရဲ့ကိုယ်သင်နံ့လေးရတော့ လီးတောင် တောင်လာတယ်၊ လွယ်အိပ်ကိုရှေ့မှကာပြီး မိုးနားကိုကပ်လိုက်တယ်။ မိုးမှာစိတ်ထဲမှာ ချမ်းသလိုတုန်သလို ဖြစ်လာတယ်။ မင်းမင်းရဲ့အသက်ရှူပြီး ထုတ်လိုက်တဲ့ ပူနွေးနွေးလေတွေကြောင့်ပေါ့။ အပျိုစင်သမိုင်း ရိုင်းလောက်အောင် ရင်ခုန်တယ်။ စကားလည်း မပြောရဲဘူးလေ၊ နောက်တော့ ကားပေါ်က မင်းမင်းဆင်းသွားမှ သက်ပြင်းလေး မျှင်းမျှင်းချမိတယ်။ မင်းမင်းအိမ်ရောက်တော့ ဦးဦးကရောက်နေပြီ၊ “မင်းမင်း. မင်းမနက်ပိုင်းကလည်း ငါ့ကိုမစောင့် ညနေလည်း ငါ့ကိုမစောင့်ဘူး၊ မင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဦးဦးကလည်း” “မင်းကျောင်းရှေ့မှာ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နှင့် စကားပြောပြီးပါသွားတာ ငါမြင်တယ် ဟေ့ကောင်၊ အဲဒါဘယ်သူတွေလဲ” “သူငယ်ချင်းတွေပါ ဦးဦး” “မင်းးနှော်မိန်းကလေးတွေနှင့် ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မလုပ်နှင့် ကြားလား” “ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးဦး” “အေးကြားလို့ကတော့ ငါ့အမွေတွေတပြားမှ မပေးဘူး မှတ်ထား” “ဟုတ်ကဲ့ဦး.ဦး” ဒီလို့နှင့်ကျနော်နှင့်မိုးတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ ချစ်သူတွေဖြစ်တော့လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်ကြဘူးပေါ့။ ကျောင်းထဲမှာ နေ့လည်ဆို ကင်တင်းမှာထိုင်ပြီး စားကြသောက်ကြပေါ့၊ နေ့လည်အတန်းချိန်မရှိရင်လည်း သူ့ဆီသွားချောင်းပေါ့ဗျာ။ အဲဒါနှင့်တရက် ကျနော်သွားချောင်းတဲ့နေ့မှ ဦးဦးက မိုးတို့အခန်းမှာ စာသင်နေတာ။ မိုးကိုငေးကြည့်တုန်း ဦးဦးကမြင်သွားတယ်။ ညနေဘက်အိမ်ရောက်တော့ “မင်းမင်းး…မင်းငါစာသင်တဲ့အခန်းဘာလာလုပ်တာလဲ” “ကျနော့်သူငယ်ချင်းဆီလာတာပါ” “မင်းကကျောင်းမတက်ပဲ သူငယ်ချင်းဆီကိုလာတယ် ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ် ဦးဦး” “မင်းကောင်မလေးဆီလာတာ မဟုတ်လား” “………” “မင်းးမင်း..လူဆိုတာလေ. အပုပ်ကောင်ရုပ် ဆောင်ထားကြတာကွ၊ သိလား၊ လောကထဲရောက်လာတာနှင့် ဇာတိဇရာ၊ မရဏဆိုတဲ့အရာတွေနင့် ဆုံတွေ့ရမှာကွ၊ မသေခင် ဥာဏ်ဦးအောင်လုပ်ရမှာ။
ကိုယ်သေရင် ကိုယ့်နောက် ဘာမှမပါဘူး။ မင်းချစ်သူကောင်မလေးကလည်း မင်းကိုချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုပြီး မင်းသေရာကို မလိုက်နိုင်ဘူး၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနေစမ်းပါကွာ” “ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဦး” “မင်းကွာ.မိန်းမတွေနှင့်မပတ်သက်စမ်းပါနှင့်ကွာ၊ မိန်းမဆိုတာ ရှိလည်းမကောင်း မရှိလို့မကောင်းဘူးတဲ့ကွ၊ နဒီမြစ်တို့လို ကွေ့ဝိုက်တတ်တယ်၊မိန်းမ မာယာသဲကိုးဖြာတဲ့။ မိန်းမဖျက်ပြည်ပျက်တတ်တယ်တဲ့။ မင်းကြည့်လေ စုဖုရားလတ်ကြောင့် မြန်မာတွေပြည်ပျက်ခဲ့တာ” “မဆိုင်ပါဘူးဦး” “ဘာလို့မဆိုင်ရတာလဲ” “သီပေါမင်းအသုံးမကျလို့ပါဗျာ” “မင်းမသိလို့ပါ၊ စုဖရားလတ်က သီပေါမင်းကို မီးနေသည်ထမီရေကိုတိုက်ခဲ့တာကွ” “ဦးကလည်းမြင်ရတာမှ မဟုတ်တာဗျာ” “အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းမိန်ကလေးတွေနှင့် မပတ်သက်နှင့်” “……” “မောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ” “ဦးဦးကြောင့်ပါကွာ” “ဟင်ဘာဖြစ်လို့လည်း” “ဦးဦးက ဘယ်မိန်းကလေးနှင့်မှ သဘောမတူဘူးလေ၊ မောင့်ကို လူပျိုကြီးလုပ်စေချင်တာ” “မောင်သာ မိုးကိုတကယ်ချစ်ရင်ပြီးတာပဲ” “မောင်မိုးကို တကယ်ချစ်ပါတယ်” “သစ္စာဆိုပြ” မင်းမင်းလည်းသစ္စာဆိုပြလိုက်တယ်” ဦးထွန်းမင်းမှာ တူဖြစ်သူကိုတားမရသဖြင့် နောက်ဆုံးတရားပြရန်၊ မိုးနေခြည်အား ကင်မရာနှင့်ချိန်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ Microscope ဖြင့် အဆပေါင်းများစွာချဲ့ပြီး၊ ရင်ခွဲရုံမှ ဓာတ်ပုံများရိုက်၍ မင်းမင်းကိုပေးလေသည်။ “ဧရာ့..မင်းမင်းကြည့်” “ဟ..မိုးပုံပါလားလှသားပဲ” “နောက်ကဟာကိုကြည့်ပါအုံး” “ဟဒါကြီးကပါလဲ၊ ရေစီးကြောင်းတွေလို ပတ်ကြားအက်တွေနှင့်” “အဲဒါမင်းကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းလေ” “ဗျာ… ဒီတောင်းကုန်းတွေနှင့် ဒီချိုင့်ခွက်ကဘာလဲဗျ” “အဲဒါမင်းကောင်မလေးပါးလဲ၊ ချိုင့်ခွက်တွေက မွေးညှင်းပေါက်တွေလေ” “ဗျာ… ဒီတွင်းနက်ငြီးကဘာလဲ။
ဒီမဲမဲကြီးက သစ်ပင်ကြီးတွေလား” “အဲဒါမင်းကောင်းမလေးနှာခေါင်းပေါ့” “ဟာဒါကြီးကရော” “မင်းကောင်မလေးမျက်လုံးလေ” “ဟာကြောက်စရာကြီးဗျာ” “အေးအားလုံးကိုအဆငါးရာလောက်ချဲ့ထားတာ” “ဟာ ဒီပုံဧတွက ဝမ်းတွင်းကလီစာတွေ” “အေးလေလူဆိုတာ သေသွားရင်အဲလိုပဲ ပျက်စီးတတ်တယ်..မင်းကြည့် အဲဒီမှာ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲရှာမတွေ့ဘူး၊ ဦးနှောက်မှာလည်း မတွေ့ဘူး၊ နှလုံးမှာလည်း မတွေ့သလို၊ အသဲမှာလည်းမရှိဘူး” မင်းမင်းမှာဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရင်း အန်ချင်လာသဖြင့် အိမ်သာထဲပြေးအံရလေသည်။ ထို့နောက်မှာတော့ မင်းမင်းတစ်ယောက် ငြိမ်သွားလေသည်။ မိုးကိုမြင်တိုင်း ဓာတ်ပု့ကိုမြင်ယောင်နေသဖြင့် စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်ဖြစ်ရလေသည်။ မိုးမှအကျိုးအကြောင်းမေးရာ မင်းမင်းလည်း အမှန်အတိုသ်းဖြေလေသည်။ မိုးတချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ကဲမောင်..မောင့်ကိုပြစရာရှိတယ်၊ မိုးနှင့်လိုက်ခဲ့” “သွားလေ” မိုးလည်းကားငှားပြီးဟိုတယ်ဘက်ကိုခေါ်ကာ အခန်းတခန်းယူလိုက်သည်။ မင်းမင်းမှာ မိုးလုပ်ရပ်ကို နားမလည်နိုင်ပေ။ မိုးလည်း အခန်းထဲရောက်ပြီး မင်းမင်းအား ကုတင်ပေါ်ထိုင်စေပြီး ရေချိုးခန်းဖက်သွားကာ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့လေသည်။ “မောင်” “ဘာလဲမိုး” “မိုးကိုကြည့်ပါမောင်၊ မိုးမလှဘူးလား” “လှပါတယ်မိုး” မိုးအပေါ်အင်္ကျီချွတ်လိုက်တယ်။ ဖြူဖွေးတဲ့အသားနှင့် လိုက်ဖက်တဲ့ နို့အုံကဘရာအပေါ်ဘက်ရုန်းကန်နေသလိုပါ။ မင်းမင်းမှာကြည့်ရင်းနှင့် လီးကတောင်လာတယ်။ မိုးက ဘရာကိုချွတ်လိုက်တယ်။ “မောင် မိုးရင်သားတွေ မလှဘူးလား” လုံးဝန်းပြီးလှပတဲ့ရင်သား၊ ပန်းရောင်သန်းတဲ့နို့ဝန်း၊ စုချွန်တဲ့နိုးသီးခေါင်းလေး၊ လှပလိုက်တာ၊ မင်းမင်းတံတွေးတချက်မြိုပြီး ဂလုလို့တောင် အသံထွက်သားပြီး “လှတယ်.သိပ်လှတာပဲ.မိုး” မိုးလူံချည်ကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။
ပင်တီပန်းရောင်လေးပေါ်လာတယ်၊ မို့ဖောင်းနေတဲ့ နေရာကြီးကိုကြည့်ရင်း မင်းမင်းအာခြောက်သလို ရင်တွေတုန်သလိုဖြစ်လာတယ်။ “မောင်မိုးလှလားဟင်” “အရမ်းးးလှတယ်” မိုးပင်တီပါဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ဖင်လေးကုန်းပြီးတော့ပေါ့။ မင်းမင်းမှာ ငေးမောကြည့်နေမိတယ်။ အလှနတ်သမီးလေးတပါး ကိုယ့်ရှေ့ကို ရောက်နေပါလားလို့ တွေးမိလာတယ်။ “အူးးး” မိုးကတပတ်လှည့်လိုက်ပြီး “ဘယ်လိုလဲမောင်.မိုးမလှဘူးလား” ဖင့်ထွားတဲ့တင်သေးသောခါးနှင့် လုံးဝန်းတဲ့နို့ အပြစ်ဆိုစရာမရှိအောင် လှပလွန်းတယ်၊ ဆီးခုံပေါ်မှ အမွေးပါးနှင့်မို့မောက်နေတဲ့အဖုတ်။ အားမင်းမင်းတစ်ယောက် မနေနိုင်တော့ဘူး၊ လီးကတောင်လွန်းလို့ ဂွေးပါအောင့်လာတယ်။ မိုးပေါင်နှစ်လုံးကိုကားပြီး ကုန်းပြလိုက်တဲ့အခါ။ ပန်းရောင်စအိုနှင့်အဖုတ်ပြူးပြူးလေးမြင်ရတယ်။ “အားးးတကိုယ်လုံးလှရက်တဲ့မိုးရယ်” “ကဲမောင်.မောင့်မျက်လုံးက မှန်ဘီလူးလို ချဲ့ကြည့်လို့ရလား” “မရဘူးမိုး” “မောင်ရယ် ပုံမှန်လေးပဲ မြင်ရတာကို မောင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတာပဲ” မိုးကအနားကိုကပ်ပြီး စကားပြောတော့ မင်းမင်းလည်း မိုးခါးကိုဖက်ပြီး မိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်။ မိုးလည်းမင်းမင်းကို ပြန်နမ်းလိုက်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှူသံတွေ မြင်လာပြီးနောက် မင်းမင်းက မိုးကိုကုတင်ပေါ် လဲချလိုက်ပြီး မိုးရဲ့နို့ကို မွေးကြူပြီးပါးစပ်နှင့်ငုံကာ စို့လိုက်တော့တယ်လေ။ မင်းမင်းလည်း နို့ကိုစုပ်ရင်း ပိပိကိုပါ ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နို့ကိုတလှည့်စီ ပြောင်းစိူုလိုက် နို့ဝန်းတွေကိုလျှာနှင့် ယက်လိုက်တဲ့အခါ။ မိုးမှာ တဟင်းဟင်း အသံထွက်လာတယ်။ “ပြွတ်…ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့..အင့်ဟင်းးဟင်းးမောင်ရယ်” “ပြွတ်..ပလပ်..လပ်..” “မောင်ရယ်..မိုးမနေတတ်တော့ဘူး” မင်းမင်လည်းကာမစိတ်က ဒီရေအလားတိုးပွားလာသလို မိုးလည်း ကာမစိတ်က တဖြေးဖြေးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီ။ မင်းမင်းလည်း မိုးရဲ့နို့ကိုစို့ပြီးတော့မှ မိုးပိပိဆီဦးတည်လိုက်တယ်။
ဦးဦးပြောတဲ့အရာတွေကနေ လာနှင်းပျောက်သလိုဖြစ်ပြီး ကာမရေအလျှင်မှာ စီးမျှောလိုက်လေသည်။ မိုးမှာ မောင်ကလဲချလိုက်သဖြင့် ကုတင်ပေါ် ကန်လန့်လဲရာမှ မောင့်အကြင်နာကို ကျေနပ်စွာခံယူလိုက်သည်။ မင်းမင်းမှာ မိုး၏ပေါင်ကိုကားပြီး အဖုတ်ကိုကြည့်ရာ မို့ဖောင်းပြီး နှုတ်ခမ်းသားထူပြီး အရွတ်သေးသေးလေးနှင့် ပန်းရောင်ပြေးနေသော အဖုတ်ကို ရှူမငြီးသောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်ပြီးနောက် လျှာကိုအပြားလိုက်လုပ်ကာ အကွဲကြောင်းတလျောက် ယက်ပစ်လိုက်တယ်။ “ရှလွတ်. ပလပ်” “အားးရှီးးမောင်..အားး” အဖုတ်ထဲမှအရည်တစ်ချို့ မင်းမင်းပါးစပ်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ မင်းလည်းမြိုချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖြဲပြီး လျှာကိုစုချွန်ပြီး အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် ယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ်..ပလပ်” “အိုး..အင့်..ဟင့်..” မိုးမှာအရမ်းကောင်းပြီး လူကိုတွန်လိမ်သွားပြီး လေထဲမြောက်သွားကာ လေဟာနယ်ထဲ ရောက်သလို ခံစားရသည့်အတွက် အိပ်ရာခင်းကိုတာ တင်းတင်းဆွဲကိုင်လိုက်တယ်။ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အားးးးးမောင်ရယ်အားးး” မင်းမင်းက မို့ရဲ့ကာမဖူးလေးကို စုပ်ယူလိုက်တာပါ။ မိုးမှာခါးမြှောက်ပြီး တင်ပါးကို အိပ်ရာခင်းနှင်ထိနေပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ အရသာခံစားလိုက်ရပြီး ပိပိထဲသွေးတိုးလာသလို တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ကောင်းသွားရလေသည်။ မိုးမှာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရပြီး ပိပိထဲမှ အရည်များအပြင်ဘက်သိုစိမ့်ပြီး တလှိမ်ချင်းထွက်လာရတော့သည်။ မိုးပြီးသွားသဖြင့် မင်းမင်လည်းမတ်တပိရပိကာ အဝတ်အစားများချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်အနားကပ်ရာ မိုးကအိပ်ရာကထလာပြီး ကြမ်းပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ မင်းမင်းလီးဆုပ်ကိုင်ကာ စုပ်လေသည်။ မင်းမင်းလည်း အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်သလို ခံစားရလေသည်။ မိုးရဲ့လီးစုပ်မှု့မှာ မကျွမ်းကျင်သော်လည်း ထိရောက်မှုက ပြင်းထန်ပေသည်။
လီးမှာလည်း အလွန်အမင်းတောင်ကာ လီးဒစ်မှာ ကားထွက်လာကြီး မာန်ဖီသလိုဖြစ်လာသဖြင့် မင်းမင်းလည်းပြီးချငိသလို ဖြစ်လာသောကြောင့် ရပ်တန်လိုက်ရသည်။ ထို့နောက် မိုးပေါင်ကြားဝင်ကာ လီးကိုမိုးပိပိထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ တင်းကျပ်မှု့နှင့်အတူ လီးကနှစ်လက်မခန့်ဝင်သွားလေသည်။ “ဗျစ်..ဗျစ်.ဗျစ်” “အင့်..အင့်ဟင့်ဟင့်.မောင်ရယ်၊ဖြေးဖြေးနှော်” လီးထိပ်မှာတင်းကနဲဖြစ်သွားမှန်းသိသွားပြီး ထပ်ပြီးရှေ့ကို ထပ်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဖောက်” “အာ့..မောင်” “နာသွားလာမိုး” “နည်းနည်းတော့ နာတယ်မောင်” မင်းမင်းလည်း မိုးအနာသက်သာဖို့ လီးထိုးထည့်တာရပ်လိုက်ပြီး မိုးနို့ကိုထပ်ပြီး ကုန်းစို့လိုက်တယ်။ မိုးမှာတင်းကျပ်တစ်ဆို့တဲ့ ဝေဒနာကိုကြိ်မှိတ်ခံစားနေရင်းက မောင်နို့စို့ပေးလို့ သက်သာလာတယ်။ “ပြွတ်..ပြွတ်.ပြွတ်” “ဟင်းးအင်းးအင်းးး” မိုးလည်းဝေဒနာကို ကာမဆန္ဒကအနိုင်ယူသွားပြီး နာကျင်မှု့တွေသက်သာလာကာ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကာမရေစီးမှာမျောပါရင်း ညည်းညူမိတော့တယ်။ “အင့်..ဟင်းးးဟင်းးးးး” မိုးသက်သာပြီးအော်ညည်းသံတွေထွက်တော့ မင်းမင်းက လီးကိုအဆုံးထိထိုးသွင်းရင်း လိုးလိုက်တော့တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်ဖတ်..ဖတ်” အာ့အင့်ဟင်းးးဟင်းးး” “ဗြိ..ဗျိ..ဖျစ်..ဖျစ်..ဘွတ်ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” အား..အင့်ကောင်းလာပြီမောင်” “အင့်ဟင်းးးဟင်းးးးးအာ့..ရှီးးရှီးး” မင်းမင်းလည်း ရှစ်မိနစ်လောက် မနားတမ်းလိုးလိုက်တော့ မင်းမင်းလည်း ပြီးချင်လာသလို မိုးကတော့ အော်ညည်းပြီးပြီးသွားတယ်။ “အာ့..ရှီးးရှီးးအားပြီးပြီမောင်.အာ့မိုးပြီးပြီ” မင်းမင်လည်း အချက်ငါးဆယ်လောက် မနားတမ်းလိုးလိုက်ပြီး သုတ်များ ပန်းထွက်သွားတော့တယ်လေ။
မင်းမင်းနှင့်မိုးမှာ အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ ချွေးများစီးကျကာ မောဟိုက်သွားကြပြီး အနားယူကာ နောက်တကြိမ်အတွက် တာစူလေသည်။ နောက်အခေါက်မှာ အပေးအယူမျှပြီး တယောက်တလှည့် အပေါ်တက်လိုးပြီး ပြီးခါနီး မိုးအားကုန်းစေကာ နောက်မှလိုးပြီး သုတ်ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ မင်းမင်းနှင့်မိုးဟိုတယ်မှထွက်ကာ အိမ်ကိုခဏပြန်ကြပြီး အဝတ်အစားနှင့် မိမိပိုင်ငွေကြေးများထည့်ကာ စာရေးခဲ့တယ်။ ဦးထွန်းမင်းမှာ အိမ်သို့ရောက်ပြီး စာကိုတွေ့သဖြင့် ဖတ်ကြည့်ရာ ဦးဦး….. ကျနော်မိန်းမခိုးသွားပါပြီ။ ကျနော့်မှာ ကျနော့်ချစ်သူအား မှန်ဘီလူးကဲ့သို ချဲ့ကြည့်နိုင်သော မျက်လုံးများမရှိသဖြင့် ပုံမှန်သာမြင်ရပါတယ်။ မိမိမျက်လုံးမှလှပသော အရာများကိုလည်း ဖျောက်ဖျက်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် အချစ်ဆိုတာ ရင်ခဲရုံမှာခွဲစိတ်ပြီး အချစ်ကိုရှာသင့်တာ မဟုတ်ပါ။ ရင်ခွဲရုံမှလူများမှာ သေပြီလူများသာဖြစ်၍ ချစ်သောစိတ်ကို ရှာလို့မရနိုင်ပါ။ တဏှာကိုလည်း ကျနော်မှာမလွန်ဆန်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်သည် သူတော်စဉ်မဟုတ်ပါ။ တရားရရှိပြီးသော ရဟန္တာလည်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကိလေသာကို မပယ်ဖြတ်နိုင်ပါသဖြင့် တဏှာခေါ်ဆောင်ရာ အချစ်ခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်သွားပါပြီ။ မိမိချစ်သူကိုသာ ထာဝစဉ်မြတ်နိုးပြီး လက်ထပ်ပေါင်းသင်းသွားမှာပါ။ ကာမဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကျနော်မျက်ဝါးထင်သိရပြီဖြစ်သဖြင့် ဦးဦးဆုံးမစကားကို နာမထောင်သော တူတော်မောင်အား ခွင့်လွတ်ပါ။ “ဟာကွာ.ဒီကောင်တော့ကွာ” လို့နဖူးကိုသာရိုက်လိုက်ပြီး ထိုင်ခုံပေါ် အရုပ်ကြိုးပြတ် ထိုင်ချလိုက်တော့သည်…ပြီးပါပြီ။
ငယ် ကြောက်တယ် ကို